'ड्रिम प्रोजेक्ट' जसलाई निर्देशकले पर्दामा हेर्नै पाएनन् - फिचर - कान्तिपुर समाचार
'ड्रिम प्रोजेक्ट' जसलाई निर्देशकले पर्दामा हेर्नै पाएनन्
निर्माता सन्तोष सुनाउँछन्- 'उसको सपनालाई मुर्त रुप दिएको छु'
कार्तिक २९, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — शिवपुरीमा 'मेरी मामू'को स्क्रिप्टको अन्तिम ड्राफ्ट तयार हुँदै थियो । त्यतिबेलै छेतेन गुरुङले आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट'बारे निर्माता सन्तोष सेनलाई सुनाएका थिए । 'छिरिङ डोल्मा'को प्रेमकथा, एउटा युगको कथा । छुट्टै राज्य, हिमालको कथा । प्रेमिकाको नाम कुँद्दै हिँड्ने प्रेमीको प्रेम ।
नाम कुँद्दै गर्दा खसेका धुलो घाँटीमा झुण्डाई हिँड्ने प्रेमकथाको प्लटले निर्माता सन्तोष सेनको पनि मन छोयो । छेतेन भने ५/६ वर्षपछि मात्र उक्त ड्रिम प्रोजेक्ट गर्ने सोचमा थिए । सन्तोष 'मेरी मामू'को काममा व्यस्त भए । तर, उनको दिमागमा छिरिङ डोल्माको कथा घुमिरह्यो । छिरिङले ढुंगा कुँदेको आवाज कानमा गुञ्जिरह्यो ।
'मेरी मामू' प्रदर्शनपछि भने सन्तोषले त्यही प्रेमकथामा फिल्म बनाउने निर्णय लिए ।
'तपाईंले ५/६ वर्षपछि बनाउने भनेको प्रोजेक्ट मैले आँटे भने के गर्नुहुन्छ? एकदिन छेतेनलाई भेटेर सन्तोषले भने । धेरै लगानी लाग्ने बताउँदै छेतेन तत्काल उक्त फिल्म नगर्ने भन्दै पन्छिन खोजे । तर उनी असाधारण प्रेमकथाको खोजीमा थिए । काल्पनिक विषयलाई पर्दामा उतार्दा कसरी व्यवसायिक महत्त्व सिर्जना गर्ने भन्नेतर्फ सोच नगएको होइन । तर उनले यो प्रोजेक्टमार्फत चुनौती मोल्ने प्रण गरे ।
'अहिलेसम्म त मैले पैसा नै कमाएको छैन । चुनौती मोल्दै आएको छु । यसमा पनि चुनौती मोल्छु भनें,' सन्तोष सम्झिन्छन्, 'त्यसपछि उहाँले २ दिन सोच्नुभयो, अनि हुन्छ भन्नुभयो ।'
छिरिङ डोल्माको प्रेमकथालाई नै नाम परिवर्तन गरेर 'प्रेमगीत ३' बनाइएको हो । आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट' पूरा गर्न नपाउँदै गत वर्ष भाद्र २४ मा ४२ वर्षिय छेतेनले संसारबाट बिदा लिए । आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टलाई लिएर उनीसँग गर्न बाँकी धेरै कामहरु थिए । उनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एउटा ऐतिहासिक प्रेमकथा बनाउन चाहन्थे । फिल्मको छायांकन उनकै गृहजिल्ला मनाङको सात गाउँमा खिचियो । तर पोस्ट प्रोडक्सनमा फिल्मको अन्तिम काम सक्न बाँकी थियो । दृश्यहरुमा कैद गरिसकेको आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टको अन्तिम रुप हेर्न नपाउँदै संसार त्यागे । डेब्यु फिल्म 'डमरुको डण्डिबियो' निर्देशन गरेका गुरुङले आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट'लाई निर्माता सेनले काखमा छोडि गए ।
छेतेन गुरुङ (बायाँ) र सन्तोष सेन ।
निर्मातालाई निर्देशक बनाएर गए
छेतेनलाई सन्तोषले पहिलोपटक बिग मुभिजमा भेटेका थिए । निर्देशक सुदर्शन थापाले छेतेनले 'नोभेम्बर रेन' लेखेको बताउँदै दुईबीच परिचय गराए । त्यो भेटमै सन्तोषलाई छेतेनले गज्जबको प्रेमकथा सुनाएको थियो - 'डायरी' । फिल्मको नाम सुन्ने बित्तिकै सन्तोषलाई रोचक लाग्यो । सुरेन्द्र पौडेललाई निर्देशनमा लिएर छेतेनसँग डायरी निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । उनले छेतेनलाई एडभान्स खर्च पनि दिइसकेका थिए ।
त्यसबीच सन्तोषको निर्माणमा बनेको फिल्म 'चंखे शंखे पंखे' सुपर-फ्लप भयो । 'प्रेमगीत'को टिम फुट्यो । यो क्षेत्रबाट सन्तोषले माया मारिसकेका थिए । तर प्रदीप खड्कालाई लिएर 'प्रेमगीत २' बनाउने भनिसकेपछि उनी उर्जाशिल बने । 'प्रेमगीत २'पछि उनी 'मेरी मामू' बनाउन तम्सिए । त्यतिबेलै उनलाई छेतेन सिर्जनशिल लागिसकेको थियो । छलफल गरिरहँदा एकैछिनमा घट्नाक्रम बनाउन माहिर थिए छेतेन । 'मेरी मामू'को लागि उनले केही प्लट थपिदिएका थिए । सन्तोष छेतेनको कामले प्रभावित हुँदै गए । त्यतिबेलै हो सन्तोषसँग छेतेनले 'ड्रिम प्रोजेक्ट'को कुरा गरेको ।
सन्तोषले आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट'माथि लगानी गर्ने भएपछि छेतेन निकै उत्साहित थिए । तर आफूले सोचिरहेको युगको रंग फिल्ममा देखाउन नसकिएला भन्ने चिन्ता थपियो । त्यसैले उनीहरु त्यही रंगको खोजीमा लोकेसन खोज्न हिँडे । ढुंगासँग भावना जोडिएको कथा । उनीहरु त्यही ढुंगा खोज्न मुस्ताङको लोमान्थाङ पुगे । लोमान्थाङबाट मुस्ताङ झरिसकेपछि भने छेतेनले नै सन्तोषलाई निर्देशनमा जोडिन सल्लाह दिए ।
'स्टोरी बोर्ड बनाउँदा पनि सँगै हुन्थ्यौं हामी । स्क्रिनप्ले पनि सँगै बनाउँथ्यौं । बाइक चलाउँदै हिमाली भेगतिर छायांकन स्थल खोज्न जाँदा पछाडि बसेका छेतेन मलाई फिल्मको कथा सुनाइरहेका हुन्थ्यो । मनाङपुगेपछि म एक्लैलाई यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ । एकदम ठूलो प्रोजेक्ट छ । दाजुभाइ मिलेर निर्देशन गरौं भन्यो उसले,' सन्तोष सम्झिन्छन् ।
नेपाली फिल्ममा निर्माताको परिचय पाएका सन्तोषले कहिल्यै निर्देशक बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् । निर्देशन गरिहाले पनि पछि कुनै कालखण्डमा गर्ने सोचे थियो । तर एक्कासी छेतेनले आफूमा निर्देशकको खुबी देखेपछि उनी सोच्न बाध्य भए ।
'मैले म कसरी निर्देशक बन्न सक्छु भन्दा, उसले अहिलेसम्म फिल्मको कथादेखि सबै कुरामा दिइरहेको इन्पुट नै हो निर्देशन भनेर भन्यो । मैले रातभरी सोचें । मैले निर्देशनमा साथ दिए आफ्नो आधा काँध हलुको हुन्छ भन्ने कुरा गरेपछि म निर्देशनका लागि तयार भएँ,' उनी सम्झिन्छन्, 'छेतेनले मलाई निर्देशक बनायो ।'
आफ्नो सपना पूरा गर्न डेढ सयजनाको युनिट लिएर छेतेनको टिम छायांकनको लागि मनाङ पुगेको थियो । फिल्मको ७५ प्रतिशत छायांकन सकिसकेको थियो । पाँच फिटको हिउँले मनाङमा फिल्मको छायांकन सम्भव भएन । सिनेम्याटोग्राफर राजेश श्रेष्ठलाई ह्रदयघातको लक्षण देखियो । निर्देशक छेतेनको खुट्टामा समस्या बल्झियो । राजेश बिरामी भएपछि फिल्मको टोली पिसाङमा तीन दिन बस्नुपर्‍यो ।
हिउँ कम भएपछि राजेशलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइयो । फिल्मका वृद्धा कलाकार सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठलगायत बाल कलाकार अनुभव रेग्मीलाई हेलिबाटै काठमाडौं पठाइयो । सन्तोष भने अन्य टिमसँग हिँडेरै बेँसीशहरतिर लम्किन थाले । हेलिकप्टरबाटै फर्कने टोलीमा थिए छेतेन । तर, उनी हेलिकप्टरबाट फर्किन मानेनन् । हिँड्ने टोलीसँगै फर्किए । त्यतिबेला सन्तोषलाई लाग्यो,'ओह्हो कस्तो साथ दिने निर्देशक । कस्तो सहयोगी व्यक्ति !'
फिल्मको ३० प्रतिशत काम महंगो सेटमै खिचिएको थियो । २५ प्रतिशत छायांकन खिच्न बाँकी थियो । ७५ प्रतिशत छायांकनमै करोडौं खर्च भइसकेको थियो । छेतेनले काठमाडौंकै जंगलमा २५ प्रतिशत छायांकन सक्ने सोचेका थिए । तर सन्तोषको मनले मानेन । छेतेनलाई डबिङको जिम्मा लगाएर सन्तोष पुरुषोत्तम प्रधानलाई लिएर बाँकी भाग खिच्न मनाङ फर्के । काठमाडौं बसेरै छेतेनले सन्तोषलाई छायांकनमा सघाउँथे । उनलाई निर्देशन दिन्थे । सन्तोषले बाँकी दृश्य खिचेर ल्याएपछि छेतेन दंग थिए ।
आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टले मूर्त रुप लिँदै गरेको देख्दा उनको मुहारमा छुट्टै चमक थियो । टिजरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलिसकेपछि पोस्ट प्रोडक्सनमा खुबै मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित उनीहरु अघि बढे । यसबीच कोभिड महामारीले देश मात्रै नभइ विश्वलाई नै आक्रान्त बनायो । फिल्मको सबै छायांकन सकिएर टोली फर्किएको ४ दिनपछि देशमा लकडाउन भयो । पोस्ट प्रोडक्सनको काम थाँति राख्नुपर्‍यो । त्यसबीच सन्तोषले आफ्नो कथामा छेतेनलाई लिएर 'हुतुतु'को स्क्रिप्टको तयारी थाले ।
महामारीबीच नै छेतेनले संसार त्यागे । आफ्नो 'ड्रिम प्रोजेक्ट' हेर्न नपाउँदै छेतेन बिदा भए ।
'ऊ बितेर गए पनि उसको सपना त पूरा भयो । तर उसले आफ्नो सपना हेर्न पाएन । अहिले कत्ति खुसी हुन्थ्यो होला । हामी सँगै काम गर्थ्यौं । कति गर्व गर्थ्यो होला । म उसलाई धेरै सम्झिन्छु,' गला अवरुद्ध पार्दै सन्तोषले सुनाए ।
छेतेन 'प्रेमगीत ३'लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन चाहन्थे । छेतेनलाई फिल्म क्षेत्रले चिन्न ढिलाई गरे पनि 'प्रेमगीत ३'मार्फत उनलाई दर्शकले सम्झिरहने दाबी गर्छन् सन्तोष । 'जे होस् उसले अझै अगाडि नै काम गर्न पाउनु पर्ने थियो । सायद कसैले उसलाई चिनेन । उसलाई चिन्न ढिला भयो । उसको क्षमता मानिसले बुझेनन् । सिर्जनशिल फिल्ममेकर थियो छेतेन । अब पाँच वर्षसम्म छेतेनलाई प्रेमगीत ३ मार्फत दर्शकले सम्झनेछन् । एउटा राम्रो आइडिया छोडेर गय । राम्रो कथा भनेर गयो भन्ने कुरा सम्झाउनेछ ।'
फिल्मको लगानी उठिसक्यो
सन्तोषका अनुसार फिल्ममा ४ करोडभन्दा माथिको लगानी लागेको छ । छेतेन 'प्रेमगीत ३'ले सन्तोषको लगानी उठाओस् भन्ने कामना गर्थे सँधै । फिल्मले व्यवसायिक सफलता चुमे उनी दयाहाङ राईलाई लिएर 'खोकबहादुरको डण्डिबियो' बनाउने योजनामा पनि थिए । अहिले सन्तोषले 'प्रेमगीत ३'लाई बलिउडको 'इम्पोसिबल फिल्म्स'लाई नेपाली बाहेक सबै भाषाको प्रतिलिपि अधिकार बेचेका छन् । ४ करोड भारतीय रुपैयाँमा उनले फिल्मको प्रतिलिपि अधिकार बेचेका हुन् । हुन त छेतेनले फिल्मलाई बलिउडमा लिएर जाने सोचेका थिएनन् । तर आफूले फिल्मलाई बलिउडमा लिएर गएकै कारण फिल्मको स्तर बढेको सन्तोषको भनाई छ ।
छेतेन आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टमा निर्माता निराश हुन नपरोस् भन्ने सोच्थे । उनको कामना पूरा भएको छ । फिल्मलाई बलिउडमा बेचेसँगै निर्माता सेनले फिल्मको लगानी उठाइसकेका छन् । 'बलिउडको बजारमा यो फिल्म लिएर गएको छु । ऊ भएको भए ममा दोब्बर उर्जा हुन्थ्यो । ऊ सकारात्मक भावना बोकेको व्यक्ति थियो । म निर्देशक नभएको भए बलिउडमा डिल गर्नै गाह्रो पर्थ्यो । सूर्यवंशीमा पार्श्व संगीत भरेका अमर मोहलीसँगलाई मेरो फिल्मको थिम र संगीतको कुरा गर्न सकें । म निर्माता मात्र भएको भए मेरो फिल्म के हो भनेर बुझाउन सक्दिन थिएँ,' सन्तोष सुनाउँछन्, 'यो प्रोजेक्ट पूरा गर्न निकै गाह्रो पर्थ्यो होला । तर अहिले फिल्मले अर्को प्लेटफर्म पायो । बाँकी रहेको काम मैले पूरा गर्नुपर्छ भनेर हो कि उसले मलाई निर्देशक बनाइदिएको ! सबै संयोग नै हुनुपर्छ ।'
'इम्पोसिबल फिल्म्स'ले अहिले फिल्मको नाम 'संघार' तय गरेको छ। नेपाली भाषामा यो फिल्म 'प्रेगगीत ३'कै नाममा प्रदर्शनमा आउनेछ । बलिउडका चर्चित डबिङ कलाकारले हिन्दी भाषाको फिल्ममा आवाज भरेका छन् । मिसन इम्पोसिबलले फिल्मको प्रदर्शन तोकेसँगै नेपालमा नेपाली र हिन्दी भाषामा यो फिल्म प्रदर्शनमा आउनेछ । फिल्म भारतीय ओटीटी प्लेटफर्ममा पनि प्रदर्शनमा आउनेछ । यो फिल्मले भारतीय बजारमा व्यवसायिक छाप छोडेमा नेपालका लागि बलिउडको ढोका खुल्नेमा आशावादी छन् सन्तोष ।
'छेतेनले सोचेभन्दा राम्रो फिल्म बनेको छ । ऊ नभए पनि उसको सपनालाई मैले मूर्त रुप दिएको छु । फिल्म प्रदर्शनपछि दर्शककले दिने प्रतिक्रिया नै उसले माथिबाट हेर्नेछ भन्ने आसा छ,' उनले भावुक हुँदै सुनाए ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ १६:३७
सज्जनराज वैद्य : युवाले मनपराउने स्वर, पछ्याउने धुन
कार्तिक २७, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — त्यतिबेला उनी न्युयोर्कको ब्रुक्लिनमा बस्थे । एकदिन गीतार बजाउँदै गर्दा शब्दहरु फुर्‍यो, 'चिठ्ठीभित्र राखेर पठाउँदैछु मेरो माया म तिमीलाई नै… ।' रोमान्टिक गीत लेख्ने मुडमा थिए सज्जनराज वैद्य । 'हवाइजहाज' बोलको गीतले युवा दर्शकको मन/मस्तिष्क हुँडलिसकेको थियो । च्याट र ह्वाटस्यापमा माया आदनप्रदान गर्ने समयमा चिठ्ठीको जमानालाई कल्पँदै उनले यो गीत लेखे । दर्शकले असाध्यै रुचाइएको गीतमध्ये पर्छ, 'चिठ्ठीभित्र'।
'परम्परागत शैलीमा आफ्नो प्रेमिकालाई भविष्यको बाचा गर्दै चिठ्ठी लेखेको कल्पना गरेर यो गीत लेखेको थिएँ । अब अहिले चिठ्ठीको जमाना हराइसक्यो,' सज्जनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै गर्दा पृष्ठभूमिमा यही गीत बज्यो ।
परिवारसँग समय बिताउन ७ वर्षपछि नेपाल आएका सज्जनसँग कात्तिक अन्तिम साता एउटा क्याफेमा गफिँदै छौं हामी। चर्चा गरिरहेकै गीत नेपथ्यमा बजेपछि सज्जन झस्किए । अप्ठ्यारो मान्न थाले । परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन प्रश्न राखेँ, 'यसरी आफ्नो गीत बजेको सुन्दा कस्तो लाग्छ ?'
'असाध्यै लाज लाग्छ । के गर्ने/नगर्ने हुन्छ । आफूले त एउटा गीत लेखेको हुन्छ । तर अरुले त्यसलाई आफ्नै बनाएर बजाउँदा, सुन्दा खुशी लाग्छ । त्यसको अनुभव बेग्लै हुन्छ । यसरी झट्ट बज्दा आफूलाई अप्ठ्यारो पनि अनुभव हुन्छ,' मुस्कुराउँदै सज्जनले जवाफ दिए ।
तस्विर - दिपेन्द्र रोक्का
प्रवासमा बसेर गीत/संगीतमार्फत युवकयुवतीको मन जित्न सफल गायक हुन् सज्जन । युवकयुवतीलाई मनपर्ने स्वर अनि उनीहरूले पछ्याउने धुन हुन् सज्जन । उनका गीतहरूमा मायाका रंग पोतिएका हुन्छन् । विछोडका पीडा पोखिएका हुन्छन् । मायाका अनेकन भावनालाई समेट्दै गीत कोर्ने सज्जन गायनमा एउटा सुन्दर उपहार हुन् । आफ्नो आवाजको जादूले लाखौं दर्शक कमाएका उनले काठमाडौं आउनसाथ नयाँ गीत सार्वजनिक गरे।
अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङमा रहेको 'नगन्य माया' बोलको गीतमा नसोचेको प्रतिक्रिया पाउँदा उनी निकै दंग छन् । 'हामीले यस्तो प्रतिक्रिया पाउला भनेर सोचेकै थिएनौं । म काठमाडौं उड्नुभन्दा अगाडि रेकर्ड गरिएको गीत हो यो । यता आएर रोहित शाक्यसँग बसेर गीत फाइनल गर्‍यौं । टिमसँग यो गीत रेकर्ड गर्ने निर्णय भएको एक हप्तामै तयार भयो गीत । म न्युयोर्क गएर भिडियो बनाएर फर्किएँ । टिमले बाँकी सबै काम सकायो,' सज्जन सुनाउँछन् ।
त्रिकोणात्मक प्रेम प्रस्तुत छ गीतमा । गीत सार्वजनिक भएसँगै सज्जनलाई लाग्न थालेको छ, 'त्रिकोणात्मक प्रेमको अनुभव त धेरैजनासँग रहेछ ।' आफूले लेखेको गीतमा अरुले आफ्नो कथा भेट्टाउँछन् । आफ्नो गीतमा दर्शक जोडिँदा उनलाई रमाइलो लाग्छ । 'नगन्य मायाको कमेन्टमा कतिले 'एक्स'को याद आयो भनेर लेख्नु भएको छ । कतिजनाले कमेन्टमै आफ्नो पुरानो प्रेमिकालाई सन्देश दिइरहेका हुन्छन् । त्यो देख्दा छक्क परिरहेको हुन्छु,' उनले भने ।
गीतको भिडियोमा सज्जन आफैं देखिएका छन् । क्यामेराको अगाडि अभिनय गर्न उनलाई त्यत्ति सहज लाग्दैन जति माइकमा गाउन । तर टिमको सिनेमेटोग्राफर नुर्बु लामाकै कारण 'क्यामेरा फेस' गर्न थालेका छन् ।
भ्युज राम्रो आयो भन्दैमा गीत राम्रो हुँदैन
भ्युजलाई गीत सफलताको मानक मान्न थालिएको छ आजकाल । धेरै भ्युज आयो भन्दैमा गीत राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्दैन सज्जनलाई चाहिँ । 'नगन्य माया'ले सार्वजनिक भएको एक हप्तामै १० लाख बढी भ्युज प्राप्त गरिसकेको छ । 'चिठ्ठीभित्र', 'हवाइजहाज', 'मुस्कान', 'हतारिँदै बतासिँदै' मा करोडौं भ्युज पाएका छन् । सज्जनलाई भ्युज र गीतको स्तर दाँजेको पटक्कै चित्त बुझ्दैन ।
सन् २०१२ मा अमेरिका उडेसँगै संगीत क्षेत्रमा सज्जनले पाइला टेके । सांगितिक माहोलमा हुर्किएका सज्जनलाई ९/१० वर्षको हुँदै हजुरबुवाले गितार किनिदिएका थिए । जन्मदिनको उपहारमा पाएको गितार दाजुसँग बसेर सिके ।
महाबौद्धमा गेमका सिडी किन्न जाँदा पसलमा 'म्युजिक' भन्ने देखेरै म्युजिक सफ्टोवयर सिक्न थाले । बिग्रेको माइक्रोफोन बनाउँदै चलाए । डेब्यु गीत 'आज मात्र'लाई उनले काठमाडौं हुँदै लेखेका थिए । त्यतिबेला माइक्रोफोन किनेर गीत रेकर्ड गर्न पनि सकिन्न थियो ।
तर अमेरिका पुगेपछि उनले रेकर्डिङका सामग्री किनेर गीत रेकर्ड गरे । गीतले उनलाई युवा दर्शकबीच चिनायो । त्यसपछाडि सार्वजनिक भएको 'हवाइजहाज' अत्यधिक दर्शकबीच उनको आवाजलाई पुर्‍यायो । उनी आफैं पनि 'हवाईजहाज'लाई संगीतमा आफ्नो डेब्यु गीत मान्छन् ।
'हवाइजहाज' उनले आफ्नो आमाका लागि लेखेका थिए पहिला । अमेरिका पुगेको धेरै भइसकेको थिएन । यता आमा उदास थिइन् । उनी आमालाई 'जसरी पनि भेट्न आउँछु' भन्दै फकाउँथे । तर त्यही गीतलाई रोमान्टिक बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह पाइसकेपछि प्रेमी/प्रेमिकाको कथामा परिणत भयो ।
आफ्नो कथाबाट लेख्न सुरु गरिएको यो गीत अन्तमा प्रेममा टुंगिन पुग्यो । अन्य गीतहरू भन्दा यसमा अलि बढी मेहनत परेको सज्जन सुनाउँछन् । यो गीतले उनलाई छुट्टै परिचय दियो । दर्शकले उनलाई खोज्न थालेको पनि यही गीतबाट हो ।
यो गीत उनले आफ्नो कथाबाट सुरु गरेका थिए । सज्जन कहिले कल्पना गरेर त कहिले आफ्नै कथामा गीत कोरिरहेका हुन्छन् । 'हतारिँदै बतासिँदै' उनको साथीको कथा हो । लोक शैलीमा तयार भएको 'फुत्की जाने जोवन' कोभिडको समयमा सार्वजनिक भएको थियो । यो एकदिनमै तयार भएको गीत थियो ।
नेपाल हुँदा साथीहरूसँग घान्द्रुक, घोडेपानी ट्रेकिङमा गएका थिए सज्जन । बाटोमा भेटिने भट्टीमा उनीहरू थकान मेट्थे, चिया पिउँथे । भट्टीमा भेटिएका बुढापाकाले उनीहरूलाई अपूरा सपनाहरू सुनाएका थिए । त्यो कुरा उनको दिमाग घुमिरहेको थियो । त्यसदिन अफिस बिदा थियो । उनले गीतको लेखन र संगीत एकै दिनमा सके ।
'बिहान ९/३० मा लेख्न बसेको थिएँ। ५:३० तिर साथीलाई सुनाएँ । ९:३० मा लगभग सबै काम सक्यो । मिक्सिङ र मास्टरिङको काम थियो । कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि गीत लेखिन्छ । त्यही भएर मलाई घरमा रेकर्ड गर्न मनपर्छ । गितार त्यही हुन्छ, समय सीमा हुँदैन । मलाई एक्लै बसेर गीतको काम गर्न मनलाग्छ । अरु हुँदा ध्यान विकेन्द्रित हुन्छ,' सज्जन सुनाउँछन् ।
'फुत्की जाने जोवन'को समयमा सज्जन आफ्नो करिअर परिवर्तन गर्दै थिए । बैंकमा काम गर्दै आएका उनी अहिले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको काम गर्दैछन् । उनी एकसाथ दुई करिअर अगाडि बढाउँदैछन् । बैंकमा ९-५ को काम गर्दा उनी खाली समय संगीतलाई दिन्थे । उनलाई संगीतमा पूरा समय दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । उनी हरबखत गीतहरूकै बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् ।
'मैले जे गरे पनि संगीत नै गर्ने हो । संगीत नै गर्छु भन्दा पनि २४ घण्टा नै गरिँदैन नि । खाली समय कतै व्यस्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । संगीत मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो,' उनले सुनाए, 'हो मलाई २४ घण्टा संगीत गर्न मन छ । तर नेपालमा त्यस्तो प्लेटफर्म नै छैन । नेपालमा गायक/गायिकालाई संगीतमै भर परेर जीवन गुजारा गर्न गाह्रो छ ।'
परिवारले संगीत पढ्न हौसला दिँदा पनि फाइनान्स पढे । 'मलाई चाहिँ एउटै मात्र करिअर गर्छुजस्तो लाग्दैन । आफूलाई जे मन लाग्छ त्यसमा गर्ने हो । मलाई 'टेक्ट'मा पनि मन छ,' उनी सुनाउँछन्, 'काम भनेको ९-५ बजेसम्म गरिएला । त्यसपछिको समयमा संगीत गर्छु । मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा नै संगीत हो । संगीत त कामजस्तो पनि लाग्दैन । म जतिबेला पनि म्युजिकबारे नै सोचिरहेको हुन्छु ।'
उनले 'उल्टा पाइला', पर्खाइ'को काम अफिसमा छुट्टि लिएर सकेका थिए । सज्जनलाई अब 'आर एण्ड बी', 'लोफाई' र हिपअपको विधामा पनि गीत निकाल्ने रहर छ ।
सज्जनले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका सबै गीत सुत्ने कोठामै रेकर्ड गरेका हुन् । स्टुडियोमा रेकर्ड गरेजस्तै हुँदैन घरमा । तर उनलाई कोठामै रेकर्डिङ गर्न मनपर्छ । सज्जन बस्ने ठाउँ परिवर्तन गरिरहन्छन् । अहिले कोलोराडो बस्छन् ।
फरक कोठामा गीत रेकर्डिङ सहज बन्दैन । तर उनी जोडजाम गरिहाल्छन् । 'नयाँ कोठामा कसरी राम्ररी रेकर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेरै गरिरहेको हुन्छु । कहिले सोफामाथि माइक राखेर रेकर्डिङ गर्छु । मैले जति ठूलो आवाजमा रेकर्ड गरे पनि आवाज बाहिर नजाने किसिमको कोठा छ अहिलेको,' उनले भने ।
'पर्खाई'बोलको गीत त उनले साथीको दराज छेउमा पर्दा राखेर रेकर्ड गरेका थिए । उनी आफ्नो साथमा माइक्रोफोन बोकेरै हिँड्छन् । प्राविधिक रुपमा व्यवस्थित रेकर्डिङ गरिएका गीतहरू हुँदैन । अहिलेको प्रविधिले सुत्ने कोठामै गीत रेकर्ड गर्न सजिलो बनाइदिएको सज्जनको भनाई छ । उनले भोकल रेकर्ड गरिसकेपछि भिडियो र त्यसपछिका सबै काममा टिमले उनलाई सहयोग गर्छन् ।
फरक सहरमा छरिएका टिम
उनी गीत लेखिसकेपछि टिमलाई थिम सुनाउँछन् । थिम सुनिसकेपछि त्यसमाथि काम गर्ने/नगर्ने छलफल हुन्छ । त्यसपछि सबैजना आ-आफ्नो जिम्मेवारीतिर लाग्छन् । नुर्बु भिडियोको कन्सेप्ट लेख्छन् ।भिडियोमा बिम्वहरूको प्रयोग गर्न रुचाउँछन् नुर्बु । सौम्य शाहले सम्पादन गर्छन् । कैलाश सुवेदीले कला हेर्छन् । सरिफ श्रेष्ठले सबै कुराको व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । राम्रो संगीत गरौं भन्ने उद्देश्यले अकस्मात जुटेको टिम हो यो ।
न्युयोर्क बस्दा नै नुर्बु र सरिफसँग सज्जनको भेट भएको थियो । सौम्य नुर्बुको मिल्ने साथी । त्यसपछि उनी सम्पादनमा जोडिन् । अन्य साथीमार्फत नै कैलाश जोडिए । टिमका सबै सदस्य फरक सहरमा छरिएका छन् । नुर्बु न्युयोर्क, सौम्य नेदरल्याण्ड, सज्जन र कैलाश कोलोराडो, सरिफ काठमाडौंमा बस्छन् । यी पाँच एकसाथ भेटेर कहिल्यै गीतको काम सुरु गरेका छैनन् । भिडियो कल र च्याटिङ मार्फत जोडिन्छन् ।
भिडियो सार्वजनिक गर्ने दिनमा सौम्य रातभर सुत्दैनन् । सम्पादनको कामले उनलाई सुत्न दिँदैन । 'आ-आफ्नो क्षेत्रमा खुबी बोकेको सदस्यहरू मेरो टिममा छन् । त्यसैले टिममा लिडर छैन । टिममा सबैको विचार मिल्नुपर्‍यो । सबैजना कामप्रति गम्भीर सदस्य छन् । हामी आ-आफ्नो पक्षमा आफैं लिडर भइरहेका हुन्छौं,' सज्जनले भने, 'नेपाली समाजमा त नातावाद चल्छ । आफ्नो दाजुभाइलाई खुबीबिना नै टिममा राखिन्छ । तर त्यस्तो हुनु हुँदैन रहेछ । पहिला केही सदस्य त्यसरी नै जोडिएका थिए । त्यतिबेला अप्ठ्यारो भएको थियो ।'
'हतारिँदै बतासिँदै'पछि टिमसँगै सज्जनले काम गर्न थालेका हुन् । गीतमा उनले 'यौनिक अल्पसंख्यक'को प्रेम प्रस्तुत गरेका छन् । उनको टिम सदस्य कसैले आफ्नो क्षेत्रमा डिग्री लिएका छैनन् । स्व-अध्ययनले नै उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । आफ्नो गीतको पछाडि टिम सदस्यको ठूलो योगदान हुने गरेको उनको भनाई छ ।
'मानिसहरू मेरो नाम मात्र हेर्छन् । मानिसहरू भिडियो हेरेपछि पछाडिको नामहरू पढिरहेका हुँदैनन् । अगाडि त मेरो नाम देख्ने हो । तर पछाडिको नामहरूको योगदान पनि त हुन्छ । सौम्य रातभर काम गरिरहेको हुन्छ । मेरो टिम नभएको भए म कहीँ पनि हुन्न थिएँ । कतिपय बेलामा के लेख्ने नै थाहा हुँदैन । शून्य हुन्छु । तर टिमले नै सल्लाह दिइरहेको हुन्छ,' उनले भने, 'मलाई विश्वविद्यालयको डिग्रीमा विश्वास लाग्दैन । मैले फाइनान्स पढेँ । अहिले सफ्टोवयर इन्जिनियरिङमा छु । यदि कसैले मलाई युनिभर्सिटीमा के गर्ने भनेर सल्लाह माग्छ भने म उनीहरूलाई त्यता जान भन्दिनँ । सर्टिफिकेट चाहिएला तर आफ्नो क्षेत्रमा आफैंले गर्न सकिन्छ । मलाई चाहिँ अब युनिभर्सिटी डिग्रीमा भरोसा लाग्दैन ।'
उनी टिमसहित चाँडै नै नेपालमा सांगितिक शो गर्ने सोचमा छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७८ १४:१९
‘खोइ कहाँ लेखिएको छ नेपाली भाषाको व्याकरण ?’
हजुरआमाको कथाले पुर्‍यायो टोरोन्टो फिल्म फेस्टिभल
आफ्नै कथा भन्ने हुटहुटीले जन्मिएका निर्देशक
हात्तीसँग भिडेका ‘सिक्किमे साइँला’
कथावाचक साइग्रेस पोख्रेल : साधरण व्यक्तिलाई असाधरण माया
श्यामसुन्दर शशि माघ ७, २०७८
२०७८ साल माघ महिनाको पहिलो सोमबार, मिथिलानगरी जनकपुरको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । झन्डै साढे पाँच हजार वर्षपछि पुनः जनकपुरधाम राजधानी घोषित भयो ।...
चुनाव सार्ने र टार्ने चक्रव्यूह नरचियोस्
सम्पादकीय माघ ७, २०७८
स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी पनि पर धकेल्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस सुरु भएको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र...
बदलिँदो नेपाली समाजको विरोधाभास
जीवन शर्मा माघ ७, २०७८
केही दशकयता नेपाल निकै उतारचढावपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तनको बाटो हिँड्दै छ । राजनीतिक रूपमा, छोटो समयमै हिन्दुराज्य, राजतन्त्र र केन्द्रशासित राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रमा...
बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव
कटक मल्ल माघ ७, २०७८
असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे समयानुकूल छलफल हुनुको सट्टा नेपालको सार्वजनिक छलफल अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा केन्द्रित छ । एमसीसी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक र कानुनी...
दृष्टिविहीनहरूको वर्गीय हितको खोजी
लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली माघ ७, २०७८
समग्र अपाङ्गता आन्दोलनको मेरूदण्डका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल नेत्रहीन संघ दृष्टिविहीनहरूको आधारस्तम्भ हो । स्थापनाकालदेखि नै अधिकारको वकालत र नेत्रहीनहरूको गुणस्तरीय जीवनका लागि संघर्षरत...
दुर्गा खनाल माघ ६, २०७८
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समयमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको सट्टा पहिले संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि...
सिटामोलकै अभाव त नहोस् न सरकार
सम्पादकीय माघ ६, २०७८
भनिरहनु परोइन, सामान्य दुखाइ कम गर्न तथा ज्वरो घटाउन सिटामोल आधारभूत औषधि हो । नेपाल सरकारको औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई अत्यावश्यक औषधिमा सूचीकृत गर्दै आएको छ ।...
महँगो निर्वाचनमा सुधारको बहस
इन्द्र अधिकारी माघ ६, २०७८
नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलो चरणमा चुनिएर आएका स्थानीय तहहरूले ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा नेपालमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली उचित हुने भन्ने बहसले फेरि एक पटक...
महाधिवेशनपछिको नेपाली कांग्रेस
अर्जुननरसिंह केसी माघ ६, २०७८
लामो संघर्षको इतिहास बोकेको, सबभन्दा जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनप्रति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार रहन्छ नै । समग्र नेता तथा कार्यकर्ता पंक्ति (र्‍याङ्क एन्ड...
अनुभवबाट सिक्दै ओमिक्रोनको सामना
ढुण्डीराज पौडेल माघ ६, २०७८
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टाभन्दा छ गुणा बढी संक्रामक छ भन्ने अनुमान गरेको छ, जुन अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि द्रुत गतिमा फैलिइरहेको छ ।...
पूर्ण खोप प्राप्त १,२७,४६,५८०
अपडेटः शुक्रबार, ०७ माघ, २०७८ । १६ : २८ बजे